Webhu 2.0, Vhidhiyo | Martech Zone
Webhu 2.0, Vhidhiyo
Chipiri, February 6, 2007 Douglas Karr
Izvi zvakatumirwa pa Problogger uye inonakidza chose.
Kana iwe usingaoni vhidhiyo, unogona kushanyira saiti: KSU, Dhijitari Ethnography
Ndine urombo Careerbuilder! iFilm inotakura Super Bowl Commercials
Mhinduro Chengeta Vashanyi Kuverenga Yako Blog
Kukadzi 6, 2007 na11: 31 PM
Wow, iyi ndiyo yakanakisa tsananguro yevhidhiyo yeWebhu 2.0. Zvakanyatsoitwa, purofesa!
Zvinoitika saizvozvo ini posted yangu "tsananguro" yeWebhu 2.0 nhasi (ndisati ndaona vhidhiyo iyi). Ini zvirokwazvo ndinobvuma kuti Webhu 2.0 ndeyekubatanidza vanhu, asi inopfuura izvo. Iko kusununguka kweInternet.